के श्रीमानद्वारा बन्धक बनाइएकै हुन् त विष्णु माझी ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष १९, २०७५ समय: १६:१८:३२
सङ्गीतकार, गायक वा गीतकारले विष्णुलाई भेट्न पाउनु भनेको त सपनाको कुरा हो । करिब १० वर्षभन्दा बढी भयो होला विष्णुलाई मैले देखेको छु भन्ने कोही भेटिएको छैन । एल्बममा प्रयोग गरिने उनको तस्बिर पनि पुरानै हुन् । एउटी लोकप्रिय गायिकाको जीवनमा किन यस्तो समस्या आइप¥यो वा यो अवस्थामा पु¥याइयो ? किन गुप्तवास बस्नुप¥यो ? उनी आफैँ गुप्तवास बसेकी हुन् वा उनलाई बाध्य बनाइयो ? यतिबेला विष्णु माझीको विषयमा जानकारी पाउन सबैको चासो बढेको छ । नेपालएब्राेडबाट